Daawo, Salaan, iyo Shaqada, Qaybta 2aad
TEXT: Markos 13: 32-37
32 Laakiin maalintaas iyo saacaddaas ninna waxba kama oga, malaa'igaha jannada ku jira iyo Wiilka toona, midna ma oga, Aabbahay.
34 Waayo, Wiilka Aadanahu waa sida nin safir dheer ka go'ay, markuu gurigiisa soo galay, oo uu addoommadiisii ​​si wanaagsan ugu taliyey, ayuu u ducaystay kuwii shaqayn jiray, oo wuxuu ku amray injiilka.
35 Soo jeeda, waayo, garan maysaan maalinta goortii macbudka dhacay, goortii waagu beryayo, ama habeenbadhkii, ama goortii diiqu ciyo, ama aroortiiba,
36 Waaba intaasoo markuu yimaado uu ku jiifsado.
--- SALAAD ---
Billy Graham ayaa yiri, "Baybalka Kitaabka Quduuska ah ee ku saabsan imaatinka labaad ee Masiixa waxa loo maleynayaa inuu yahay 'qiyaastii' wacdinta '. Laakiin hadda maahan. Waa rayiga kaliya ee rajada ah ee soo iftiimaya sida iftiimid weligeed ah ee duni madow. "
Farriintayagii ugu dambaysay, waxaan bilaabay inaan eegno tusaalayaal ka mid ah albaabka guriga, ama masaalka reerka Master, si uu inooga sheego waxa aan u baahannahay inaan sameyno sidii aan rajeyneyno Imaanshada Labaad ee Ciise Masiix. By nimcada Ilaah, waxaan ku waajib ah in ay noqdaan kuwo aamin ah iyo mashquul ilaa ay soo laabashada Master. Annagu waxaannu u hawshoonnahay inaan ku oofiyo maqnaanshaha jidhka Rabbigeenna.
Ciise wuxuu ku bilaabmaa masaalkan saddex amarro oo waajib ah inaan u hoggaanno. Kan ugu horreeya waa, "Iska ilaali." Weedhani micnaheedu waa in la eego ama la fiiriyo. Ciise wuxuu rabaa inaynu dareenno isaga, amarradiisa, iyo tusaalihiisa. Waxaan nahay inaan noqono wakiiladiisa on this Earth. Haddii aad u dirtay qof kuu wakiil ka ah hay'ad gaar ah, waxaad dooneysaa in ay si gaar ah u dhaqmaan. Sidoo kale, Ciise wuxuu rabaa in aan nafteena ku samowno qaab gaar ah dunida oo dhan maxaa yeelay dunidu waxay inoo eegaysaa inaan aragno waxa Ciise yahay. Hadday tahay inaan raacno tusaalihii Ciise, waa inaynu u fiirsanaa isaga.
Si kastaba ha ahaatee, qaar badan oo naga mid ah ayaa indhaheenna ku haya waxyaabo adduunyo ah, hoggaamiyeyaasha siyaasadda, ama horumarka shakhsi ahaaneed. Diyaar ma u nahay soo laabashada Ciise, mana rabno inaan diyaar u ahaado. Waxaan indhahayaga eegay wax kasta oo kale, laakiin Ciise Masiix. Yaad aad u fiirsataa maanta? Yaa dhegta kaa haya? Yaa ishaada ku haya? Muhiimad ka badan, cidda ama waxa ay qabteen maskaxdaada? Ma waxaad Yooxanaa ku odhanaysaan, Saas ma aha, Sayidow? Ama, ma waxaad leedahay, "Rabbi Ciise Masiix, kaalay, laakiin markaan dhammeeyo waxa aan doonayo inaan sameeyo"?
Ma naqaanno nimcada Rabbi Ciise Masiix si ay u helaan noloshaan illaa aan ka digtoonno waxa Ciise noo sheegayo. Haddii aan u hoggaanno farriimaha dunidu u dirto, jidhka, iyo Ibliiska, waxaan dhumin doonaa qanacsanaan la'aan, walwal, niyadjab, iyo wareer. Dunidan awood uma leh inay ku qanciso dareenka qotada dheer. Waa inaanan wakhti wakhti wakhti ku qaadin farxadda iyo dhammaystirka halka aan laga heli karin. Taa bedelkeeda, xubno ka tirsan Aqalka Hore, waxaynu u fiirsanaa Master of House, Ciise Masiix. In kastoo uu u muuqdo inuu safar dheer soo maray, wuxuu had iyo jeer nala joogaa, weligiis naga tagi mayno, hal maalinna wuu ku soo laaban doonaa si uu naga geeyo meeshii uu inoo diyaariyey.
Frances J. Crosby ayaa qoray:
Soo jeeda oo tuko in markii uu Sayidku yimaado,
Haddii aroortii, duhurkii, ama habeenkii,
Waxa laga yaabaa in laga helo daaqad kasta oo daaqad kasta,
Jaranjiray, iyo gubid cad oo dhalaalaya.
Ilaali oo u tukado, ha ka tagin shaqadeena,
Ilaa aan ka maqalno codka Bridgemo;
Markaasay la socdeen isaga oo guursaday,
Weligay waan ku farxi doonaa.
Soo jeeda oo tukada, Rabbiga ku amar;
Iska ilaali oo u tukadaan, 'Marna ha sii dheereyn.
Dhawaan ayuu soo ururin doonaa gurigiisa,
Maaddaama dareenka farxadda ee gabayada.
Hadda, haddii aadan ahayn Masiixi Ciise Masiix, waxaan kuugu boorinayaa inaad ku kalsoonaataan isaga sababtoo ah wuxuu mar kale soo socda oo aadan rabin inaad ka tagto. Halkan waxa weeye sidaad u dhigi kartid rumaysadkiinna iyo kalsoonidiisa isaga badbaadinta denbiga iyo cawaaqibka dembiga.
Marka hore, aqbal xaqiiqda ah inaad tahay dembiile, iyo inaad jebisay sharciga Ilaah. Baybalku wuxuu sheegayaa Rooma 3:23: "Dhammaantood way wada dembaabeen, oo waxay ka gabyeen ammaantii Ilaah."
Marka labaad, aqbal xaqiiqda ah inay jirto ciqaab dembi ah. Kitaabka Qudduuska ahu wuxuu ku xusan yahay Rooma 6:23: "Waayo, mushahaarada dembigu waa dhimashada ..."
Saddex, aqbal xaqiiqda ah inaad ku jirto jidka jahannamada. Ciise Masiix wuxuu ku yiri Matayos 10:28: "Ha ka baqina kuwa jidhka dila, laakiin aan awoodin inay dilaan, laakiin ka baqa kan naftiisa iyo jidhka jahannamada ku baabi'in kara." Sidoo kale, Kitaabka Qudduuska ahu wuxuu sheegayaa Muujintii 21: 8: "Laakiin kuwa cabsila'aana, iyo kuwa aan rumaysan, iyo kuwa karaahiyada ah, iyo gacankudhiiglayaasha, iyo kuwa sinaysta, iyo saaxiriinta, iyo kuwa sanamyada caabuda, iyo beenlowyada oo dhan waxaa iska lahaan doona biyaha agtiisa, naxwe: taas oo ah dhimashada labaad. "
Hadda waa war xun, laakiin halkan waa war wanaagsan. Ciise Masiix wuxuu ku yiri Yooxanaa 3:16: "Ilaah intuu dunida jacayl u qabay ayuu siiyey Wiilkiisa keliya oo dhashay in mid kastoo isaga rumaystaa uusan lumin laakiinse uu lahaado nolosha weligeed ah." Kaliya aaminsan tahay in Ciise Masiix uu ku dhintay dembiyadiina, waa la aasay, oo ka soo sara kacay kuwii dhintay by awoodda Ilaah si aad u noolaan kara weligiis isaga la leh. U soo ducee oo waydiiso inuu ku yimaado qalbigaaga maanta, wuuna rabaa.
Rooma 10: 9 & 13 wuxuu leeyahay, "Haddii aad afkaaga ku qirto Rabbi Ciise, oo aad rumaysan tahay in Ilaah ka sara kiciyey kuwii dhintay, waad badbaadi ... Rabbi waa la badbaadin doonaa. "
Haddii aad aaminsan tahay in Ciise Masiix uu ku dhintay dembigaaga dembiyadiinna, waa la aasay, oo ka soo sara kacay kuwii dhintay, oo aad doonaysid inaad ku aamino badbaadadaada Badbaadadaada, fadlan ila soo duceyso tukashadan fudud: Aabbaha Quduuska ah, waan ogahay inaan Anigu waxaan ahay dembiile iyo inaan sameeyo waxyaabo xun noloshayda. Waxaan ka xumahay dembiyadayda, maantana waxaan dooranayaa inaan ka soo noqdo dembiyadayda. Waayo, Ciise Masiix aawadiis, dembiyadaydii i cafi. Waxaan aaminsanahay dhammaan qalbigayga in Ciise Masiix aniga igu dhintay, la aasay, oo dib u kacay. Waxaan ku kalsoonahay Ciise Masiix sidii Badbaadiyahayga iyo waxaan dooranayaa inuu raaco isaga oo ah Rabbiga ilaa maanta. Rabbi Ciise, fadlan kaalaya qalbigayga iyo naftayda badbaadi oo noloshayda iska bedesho maanta. Aamiin.
Haddii aad ku kalsoon tahay Ciise Masiix sidii Badbaadiyehaaga, oo aad tukatid tukashadan oo macneheedu ka soo jeedo wadnahaaga, waxaan idiin sheegayaa in ku salaysan ereyga Ilaah, hadda waxaad ka badbaadisay Jahannamada oo aad jidkaaga jannada ku jirtaa. Ku soo dhawaada qoyska Ilaah! Hambalyo ku saabsan sameynta waxa ugu muhiimsan ee nolosha iyo in la helayo Ciise Masiix sida Rabbiga ah Badbaadiyehaaga. Wixii macluumaad dheeraad ah si aad uga caawiso inaad ku korodho rumaysadkaaga cusub ee Masiixa, u gudub Gospel Light Society.com oo akhri "Waxa aad sameyneyso marka aad gasho albaabka." Ciise Masiix wuxuu ku yiri Yooxanaa 10: 9, "Anigu waxaan ahay albaab, haddii qof uun galo, wuu badbaadi doonaa, oo wuu iman doonaa, oo geli doonaa, oo wuxuu heli doonaa daaqsin."
Ilaah wuu idin jecel yahay. Waan ku jeclahay. Oo Ilaah wuu idin barakayn doonaa.